Shina: Tsy maintsy fanondranana tany tsy fahita firy sa tsia ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2020 7:43 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktôbra 2010, ary raha tsy misy fanamarihana manokana, dia rohy mankany amin'ny teny anglisy ny ato anaty lahatsoratra)
Ireo tany tsy fahita firy dia ilaina amin'ny: fanamboarana ireo fitaovana ilain'ny teknolojia avo lenta, toy ny finday, ny vatoaratra, ny fàfana amin'ny fahitalavitra sy ny solosaina ary maro hafa tsy àry ho tanisaina. Raha ny tarehimarika tamin'ny 2009, i Shina no manana ny 36% amin'ny tarihy erantany amin'ny tany tsy fahita firy (36 tapitrisa taonina), nefa miantoka ny 97% amin'ny fitrandrahana manontolo ataony.
Hatramin'ny Septambra, rehefa injay i Shina nampiato vonjimaika ny fanondranany ireo tany tsy fahita firy nankany Japàna, vokatry ny ady tany ao amin'ireo nosy Diaoyu, niakatra ny fihenjanana momba ny tolotra tany tsy fahita firy, ary dia niditra tamin'ilay resaka ny firenena hafa. Nanamafy ny Federasiônan'ny Indostria Alemàna fa “lasa resaka jeopolitika” ireo tany tsy fahita firy, na teo aza ny fanambaràna nataon'ny governemanta shinoa fa “tsy ho atao fitaovana fanambàzana izy ireny“. Fivoarana faramparany tamin'io raharaha io, omaly ny sekreteram-panjakana amerikàna dia nilaza tao anaty antsafa iray ho an'ny mpanao gazety fa manantena an'i Shina hanohy tsy misy sakantsakana ny tsenambarotry ny tany tsy fahita firy.
Izay ny eo amin'ny sehatra iraisampirenena. Fa ao anatin'ny firenena kosa, miaraka amin'ny fitomboan'ny fihetsehampo miaro tanindrazana, betsaka amin'ireo shinoa ao amin'ny tanibe no mankasitraka ny fameperana nataon'ny governemanta amin'ny fanondranana ireo tany tsy fahita firy.
Ny tantaran'ny fanondranana ireo tany tsy fahita firy
Raha ny marina dia tamin'ny taona 2009 no nanombohan'ny adihevitra momba ireo tany tsy fahita firy. Tamin'izany fotoana izany sahady, efa resaka fiarovampirenena no hitan'ilay bilaogera SMPB tao anatiny. Ampahatsiahivin'io bilaogera io ny tantaran'ireo fanondranana tany tsy fahita firy nataon'i Shina :
Tamin'ny 2002, taorian'ny nidirany ho ao anatin'ny OMC, tsy dia nisy zavatra fantatr'i Shina loatra momba ny tena lanjan'ireo tany tsy fahita firy, ary namoaka tatitra iray momba ireo fironana 6 goavana amin'io sehatra io izy. Manaraka ny fotokevitry ny OMC ilay tatitra ary nataony ho tanjona ny haka tombontsoa amin'ny fifehezana ny vidiny sy amin'ny famoronana fantsona fanondranana, hahatonga an'i Shina ho hery mibahana toerana eo amin'ny resaka varotra tany tsy fahita firy.
Saingy tamin'ny Aprily 2009, nambaran'ny minisitry ny harena ankibon'ny tany tao Shina ny rafitra iray mametraka fatra amin'ny fitrandrahana ireo tany tsy fahita firy. Io fanapahankevitra io dia nampihena ny habetsahan'ny famokarana ireo tany tsy fahita firy sy nampiato koa ny fanomezandàlana ireo tetikasa vaovao fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Sady koa, napetraky ny governemanta shinoa ireo fameperana amin'ny fanondranana, tamin'ny alàlan'ny fametrahana haba. Nanaitra ny Fiombonambe Eorôpeàna, Etazonia, Japàna ary i Korea io politika vaovao io . Ny 22 Jona 2009, nanapaka hevitra ny hifampiraharaha amin'ny governemanta shinoa ny Fiombonambe Eorôpeàna sy Etazonia. Raha sanatria tsy hahomby ny fifampiraharahàna, dia mety hitondra ny raharaha eo anoloan'ny OMC ry zareo. Raha ny voalazan'ny loharano avy ao anatin'ny Fiombonambe Eorôpeàna, “hiteraka fikorontanan'ny tsena erantany sy hanimba ireo orinasa eorôpeàna sy amerikàna ilay haba napetraka amin'ny fanondranana ataon'ny shinoa amin'ireo akora fototra”.
Resy lahatra ilay bilaogera hoe resaka fiarovampirenena no anton'ireo fameperana:
Manana dikany lalina be ireo akora fototra miisa 20 fampiasan'ny indostria ka nentin'ny Fiombonambe Eoropàna sy Etazonia ho eo ambony latabatry ny OMC : ny fiarovam-pirenena. Singa tena ilaina amin'ny famokarana ireo fitaovampiadiana avolenta mampiasa teknolojia ireny tany tsy fahita firy ireny. Ny fanondranana nataon'i Shina tany aloha tany dia manozongozona ny fiarovam-pirenena azy manokana ihany koa, amin'ny fanampiana ireo firenena any ivelany ho afaka mitrandraka sy mamokatra fitaovam-piadiana avo lenta mampiasa teknolojia. Io paika stratejika io no tsy ambarambara ao anatin'ilay adihevitra.
Fandementsaina iraisampirenena ve?
Amin'izao dingana vaovao misy ny adihevitra izao, ity bilaogera ity, miaramila tranainy, dia mahita koa ao anatin'ilay raharaha ny fisiana tsindry iraisampirenena atao amin'i Shina. Ity no lohatenin'ny bilaoginy “Manao tsindry amin'i Shina ireo hery vahiny mba hanondranany ireo tany tsy fahita firy”. Tatitra iray no tanisain'ilay bilaogera, Singa tany tsy fahita firy : ny rojom-pamatsiana erantany (pdf [amin'ny teny anglisy]) nosoratan'i Marc Humphries, mpandalina ny politika momba ny angovo, ary tsipihany ny hoe :
Raha ny tahiry isam-batanolona no jerena, ny an'ireo tany tsy fahita firy no betsaka indrindra ao Etazonia sy Rosia raha miohatra amin'ny any Shina. Kanefa, i Shina ery amin'ny zanatohatra farany ambany indrindra amin'ny rojom-pamokarana no mamokatra ny 97% amin'ireo tany tsy fahita firy vokarin'izao tontolo izao. Mitanila tanteraka mihitsy ny fifandanjan'ny tahiry sy ny vokatra. Ao Etazonia ny 13% amin'ny tahiry erantany amin'ny tany tsy fahita firy, saingy tsy mitrandraka mihitsy zareo fa miankina 100% amin'ny fanafarana. Tsy marina araka izany ny filazàna hoe ireo fameperana ataon'ny shinoa amin'ny fanondranany ireo tany tsy fahita firy dia mitondra ho amin'ny tsy fahampian'ny famatsiana. Tsy misy mihitsy tsy fahampian'ny tany tsy fahita firy, fa ireo tany tsy fahita firy amidy amin'ny vidiny mora avy any Shina fotsiny ihany no misy.
Misy akony any amin'ireo sehatra fifampiresahana anaty aterineto ireo kabary nasiônalista mandresy lahatra. Ao amin'ny Baidu Tieba, ampangain'ny betsaka ho mpamadika tanindrazana ireo mpanao risoriso ny tany tsy fahita firy. Raha naneho hevitra tamin'ireo vaovao vao haingana momba ny fanondranana an-tsokosoko ireo tany tsy fahita firy, nanoratra i Dandelion (成长的蒲公英a) hoe:
Afaka mivarotra ny firenena ve ianao ho an'ny tombontsoanao manokana ? Firenena anaty firoboroboana i Shina ary mbola betsaka no tokony hatao. Mazava loatra fa n toekarena no olana fototra. Rehefa miteny ireo firenena manankarena hoe tia maka tombony kely fotsiny ry zareo Shinoa, dia tena tsy manaja tsotra izao ny vahoaka shinoa ry zareo. Naka tombony be taminay ry zareo! Tsy tiany ho very ny tahirina akora fototra azy ireo manokana, tsy tiany ho simba ny tontolo iainana any amin'ny fireneny. Izany no antony ahatongavany mividy ireo tany tsy fahita firy ananan'ny shinoa. Na lafo sy ahitam-bokany be aza ireo tany tsy fahita firy, mbola avo lavitra noho ny vidiny ny sandan'izy ireny. Raha ny marina, amin'ny vidin'ny anana no amarotantsika ny volamena. Na mpanankarena aza ianao izao, tsy misy dikany amin-dry zareo akory ianao. Tsy misy afa-tsy ny hoe rehefa matanjaka ny firenentsika sy hoe hitohy hitombo ny toekarentsika, izay isika vao afaka hizotra tsy mitanondri-doha sy hiteny amim-pireharehàna hoe: Shinoa izahay ! Aza simbàna noho ny tombontsoan'ny tena manokana ny politikan'ny firenena. Tsy maintsy miray hina ireo 1,3 lavitrisa eto amintsika mba hananan'i Shina hoavy mamiratra. (Ankoatra izay, ndao hohamavoina ny Amerikàna, ny Japoney…. ndeha hohamavoina ireo manao fanondranana an-tsokosoko ireo tany tsy fahita firy ho amin'ny tombontsoany manokana. Tsy ireo tany tsy fahita firy no amidinareo fa ny maha-izy azy ny vahoaka shinoa sy ny hoavin'i Shina. Olona marary saina ilay mpanondrana an-tsokosoko tao Tsingtao. Tsy tsaroany ny famonoana faobe tao Nankin. Sahiny mihitsy aza ny mivarotra amin'izany amin'ireo Japoney. Tsy atahoranareo ve hoe mety ho andarohana anareo ny baomba atomika manaraka eo?)
Fa iza loatra no nandray tany am-boalohany tany ny fanapahankevitra hivarotra ireo tany tsy fahita firy? Tao amin'ny Baidu Teiba, YierYier Wei manome tsiny mafy an'ireo mpandray fanapahankevitra, ary tsy taraiky tamin'ny fikendrena ireo tomponandraikitra mpanao kolikoly ireo fihetsehampo nasiônalista :
YierYierWei: Fitantanana shinoa, tsy ho takatrao velively ny lanjan'ireo tany tsy fahita firy.
124.231.90.*: Ny hany fantatr'ireo, aiza no azo hihinanana sy hanararaotana ny fiainana, ary mameno ny paosiny isaky ny afaka manao izany.
Missing szy: Tsy olona nofidiana ireo manampahefana ao anatin'ny governemanta. Tsy misy dikany izay fanehoankevitry ny vahoaka.
Aukulisi: Rehefa lafon-dry zareo daholo ireo tany tsy fahita firy ananantsika, hifindra any amina firenena hafa ry zareo. Tsy misy iraharahian-dry zareo antsika, na ho faty na ho velona. Ankoatry ny kenda roroka atao amin'ireo tany tsy fahita firy, tsy maintsy sakanana tsy hifindra monina ireo manampahefana ao anatin'ny governemanta.